IDM6.03beta Version Crack File [Software]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » IDM6.03beta Version Crack File [Software]
1 IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 20th December 2010, 3:33 pm
(မသိသေးသူများအတွက် အ ဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ သိပြီးသူများလည်း ပိုသိသွားတာပေါ့ )
IDM ကိုသုံးဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အသည်းကျော် downloader လေးပါ။ ကျွန်တော်လည်းအရမ်း ကြိုက်တဲ့ software တစ်ခုပါ။ သယ်ရင်းများလည်းကြိုက်ကြ လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ အခုပြောချင်တာက နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ 6.03 beta version ၏ crack file လေးကို ပေးချင်လို့ပါ။ လိုချင်ယင် အောက်က ပေးထားတဲ့လင့် မှာ သွားပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးယင် zip file ကို ဖြေပြီး ၊ Double click နှိပ်လိုက်၊ Box ပေါ်လာယင် Left Button ကို နှိပ်လိုက်တာနှင့် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
မှက်ချက်။ ။ IDM 6.03beta Version ကို Install လုပ်ပြီးယင် Window ၏ ညာဘက်အောက်က IDM logo ကို Exit ပေးပြီးခဏထွက်ထားလိုက်ပါ။
IDM 6.03 beta version Direct Link : [You must be registered and logged in to see this link.]
Crack file Link: [You must be registered and logged in to see this link.]
Here New Link for crack file : [http://www.mediafire.com/?y4hbctbui0zmbhs ]
2 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 3rd January 2011, 9:49 am
အစ်ကိုပေးတဲ့ link ကိုဒေါင်းလိုက်တော့ 6.04 ဖြစ်နေတယ်ဗျ
6.04 crack လေးရှိရင်တင်ပေးပါ့လား
3 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 3rd January 2011, 2:30 pm
အကိုမှာ 6.04 crack file မရှိသေးဘူး။ ရှိယင်အကိုတင်ပေးပါမယ်။ညီလေး လောလောဆယ်သုံးချင်ယင် 6.03 exe file တော့ရှိတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ သွားဒေါင်းလိုက်ညီလေး။ အဆင်ပြေပါစေ။
6.03 exe file link :
4 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 5th February 2011, 9:51 am
ကျွန်တော် ဒီက IDM603 လေးကိုသုံးနေရာကနေ တခြား မြန်မာ blogger တစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ 604 version လေးနဲ့ crack (patch) လေးတွေ့လို့ update လုပ်လိုက်တာ fake serial number ပြပါလေရော ဒါနဲ့ uninstall လုပ် ပီး အရင် version လေးပဲပြန်တင်တော့လည်း fake serial number ပြပြနေတယ်။ ဒါနဲ့ တင်လိုက်ချလိုက်လုပ်တာ အကြိမ်ပေါင်းလည်းမနည်းတော့ဘူး အဲဒီ fake serial number ပြတာကြီးက လုံးဝကို မပျောက်တော့ဘူး။
အခု ကျွန်တော့မှာ ဘာမှကိုဒေါင်းလို့မတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အစ်ကို
5 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 5th February 2011, 11:51 am
မှာ internet download manager 6.04 build2အတွက်downloadလုပ်လို့ရပါတယ်။patch fileပါပါပြီးသားပါ။
6 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 5th February 2011, 12:55 pm
Internet Download Manager 6.05 Final လေးပါ။ Patch ပါပြီးသားပါ။
သေချာစစ်ပြီးမှ Upload လုပ်ပြီး ပိုစ့်တင်ပေးတာပါ။
7 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 5th February 2011, 3:18 pm
ညီလေး စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် အကြောင်းပြန်တာနောက်ကျသွားတယ်။ အကို့အယင် ညီ 2ယောက် တင်ထားတဲ့ ပိုစ် ကိုတွေ့ရလို့ အကို့ကိုယ်စား ကူညီတင်ပေးထားတဲ့ အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ညီလေးပြောတာ uninstall လုပ်တာဆိုလို software သုံးပြီးလုပ်တာလာ။ ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန် uninstallကိုလုပ်တာလား။ တစ်ချို့ဆိုယင် files တွေ အကုန်မပျက်ဘူးကွ။ အကိုသိသလောက်ပြောရယင် C: ထဲကProgram မှာ IDM ကိုရှာလိုက်ပြီးDelete လုပ်ဖျက်လိုက်။ Restartချပြီး ပြန် Install လုပ်ကြည့်ပါလား။ အကိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်။ အကိုမှာIDM Version အသစ်တော့မရှိသေးဘူး။ IDMကိုမှသုံးချင် ယင်အကိုမှာ Version အဟောင်းတော့ရှိတယ်။ အောက်က Link မှာသွားဒေါင်းလိုက်။ကိုညီနေမင်းဆီကရတာ။ တိုက်ရိုက်သွားဒေါင်းလဲရတယ်။ သူကInstall လုပ်ပြီးယင် IDMကို Exit ပေးပြီးခဏထွက်ထားလိုက်ပြီးယင် Crackfile ကို Copy လုပ်ပြီး C: ထဲက Program ထဲက IDM file ကိုရှာပြီး Paste လုပ်လိုက်ညီလေး။ ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီး။ Download လုပ်တိုင်း Box တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ပိတ်ပစ်လိုက် ။
IDM 5.19.2 version
8 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 8th February 2011, 1:36 pm
ဟုတ်အကို အကိုပြောတဲ့တိုင်း C: ထဲမှာကျန်နေတာတွေနဲ့ ၇ှိသမျှဖိုင်တွေကို search နဲ့၇ှာပီးဖျက်တော့ လုံးဝဖျက်လို့မ၇တဲ့ DLL ဖိုင်လေးတစ်ခု၇ှိနေတယ် အဲဒီကောင် ဒုက္ခပေးနေလို့ထင်တာပဲ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ .
ပြောပြပေးပါဦး . အသစ်ကတော့ ခုထိ တင်မရသေးဘူး . ဘယ် version မှ ကို တင်မရတာ .
9 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 8th February 2011, 2:49 pm
အင်း အကိုသိသလောက်ပြောရယင် restart ချ ပြီးပြန်ဖျက်ကြည့်ပါအုံးညီလေး။ မရယင် တော့ 1-2 ရက်လောက်စောင့်ပြီးမှ ထပ်ဖျက်ကြည့် ပါ။ အဆင်ပြေမှာပါ။ လောလောဆယ်သုံးချင်ယင် IDM နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံချင်ဆင်တူတဲ့ firefox က addon တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DownThemAll Addon ကို install လုပ်ပြီးသုံးကြည့်ပါလား။ သူလည်းကောင်းတာပါပဲ။ သုံးချင်ယင်
Firefox ကို ဖွင့် Menu bar က Tools ထဲက Addonsကို နှိပ် Gets Addonကိုရှာ Search Box မှာ Downthemall ရိုက်လိုက်ပါ။ Auto searchလုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးယင် Add to firefox ကိုနှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးယင် လုပ်နေကျအတိုင်း restart ချလိုက်။ ဒါဆိုသုံးလို့ ရပြီးပေါ့။
မှက်ချက်။ ။ Firefox version ကအနည်းဆုံး between 3.5 to 3.6 ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ 3.6 ထက်ကျော်ယင် အလုပ်မလုပ်ဘူး။
နောက်တစ်နည်းရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါက system restore ပြန်လုပ်တာပဲ။ လုပ်ပုံက start menu --- All programs ---accessories--- system tools---system restore ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ box ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ click --Restore my computer to an earlier time and next အဲဒီထဲက မိမိပြန်သွားချင်တဲ့ ရက် ကို ရွေး ရမှာဖြစ်တယ် ။ ( bold ဖြစ်နေတဲ့ ရက်စွဲ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်ပြီး ဒီပြသနာမဖြစ်ခင်တစ်ရက်အလို နေ့စွဲလည်းဖြစ်ယင်ပိုကောင်းတယ်။ ဆိုလိုတာက ပြသနာက 3ရက်နေ့ဖြစ်တယ် ။ဇယားမှာ bold ဖြစ်တဲ့ ရက်စွဲက 2ရက်နေ့ ရှိယင် အကောင်းဆုံးပေါ့ )
မှက်ချက်။ ။ system Restore လုပ်ယင် မိမိ နောက်ဆုံး လုပ်ထားတဲ့ up to Date တွေ အားလုံးပျောက်သွားပြီး မိမိရွေးထားတဲ့ နေ့စွဲ မှာ ရှိတဲ့ အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လိုချင်ယင် ပြန်ပြီး Up to Date လုပ်ရမယ်။
အကို့ စာက ရှည်လိုက်တာလို့ မထင်ပါနဲ့ နော်။ အကို က (လုံးဝ) မသိသေးတဲ့ User များအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးရေးထားတာပါ။
Last edited by william016 on 9th February 2011, 4:58 pm; edited2times in total
10 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 8th February 2011, 4:50 pm
အားရင်တော့ IDM ရဲ့ patch ဖိုင်ကို တင်ပေးပါ့မယ်။
11 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 22nd February 2011, 8:19 am
IDM နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ ...
- IDM ကို Visual C++ 6.0 နဲ့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Protection လုံးဝမထားရှိပါဘူး။
- IDM မှာ registration လုပ်တာ အောင်မြင်ဖို့ OFFLINE နဲ့ ONLINE check တွေကို ဖယ်ရှားရပါမယ်။
- Crack လုပ်နည်းကို IDM 6.05 ကို နမူနာထားပြီး ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
OFFLINE ဖြင့် register ပြုလုပ်နည်း
(၁) IDM Version တိုင်းမှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။
75 0B 85 FF 74 07 8A 45 EF 84 C0 74 16 8B 15 ?? ?? ?? ?? 8B 4D C8 6A 00 68 ?? ?? ?? ?? 52 E9 A9 FC FF FF ကို ရှာပါ။ ဆိုလိုတာကအောက်ပါကုဒ်တွေကို ရှာဖွေပါ။
004C99E6 75 0B JNZ SHORT IDMan.004C99F3
004C99E8 85FF TEST EDI,EDI
004C99EA 74 07 JE SHORT IDMan.004C99F3
004C99EC 8A45 EF MOV AL,BYTE PTR SS:[EBP-11]
004C99EF 84C0 TEST AL,AL
004C99F1 74 16 JE SHORT IDMan.004C9A09
004C99F3 8B15 04216600 MOV EDX,DWORD PTR DS:
004C99F9 8B4D C8 MOV ECX,[LOCAL.14]
004C99FC 6A 00 PUSH 0
004C99FE 68 C8706300 PUSH IDMan.006370C8
004C9A03 52 PUSH EDX
004C9A04 E9 A9FCFFFF JMP IDMan.004C96B2
ပြီးရင် 90 (NOP) တွေနဲ့ အစားထိုးပါ။ ?? တွေနေရာမှာတော့ HEX ဂဏန်းတစ်ခုခုဖြစ်နေပါမယ်။
(၂) ဒီလို HEX ဂဏန်းစာလုံးအစားထိုးပြီးသွားရင် Help menu က Registration ကိုရွေးပါ။ Serial နေရာမှာ အောက်ပါပုံစံနဲ့ နှစ်သက်ရာစာလုံး ရိုက်ထည့်ပါ။
နမူနာ။ ။ XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Serial ဟာ စာလုံးအရေအတွက် ၂၃လုံးရှိရပါမယ်။
ဒါဆို register ဖြစ်ပါပြီ။
(၃) အဆင့်(၁) နဲ့ (၂) ကိုမလုပ်ဆောင်ချင်ဘူးဆိုရင် IDM.reg ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးတစ်ခု ဖန်တီးပြီး အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်သိမ်းဆည်းပြီး registry ဖိုင်ကို merge လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ IDM ရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ register တစ်ခါလုပ်ထားရင် version ပြောင်းလဲရင်လဲ ဆက်သုံးလို့ရပါတယ်။ Register လုပ်ထားခြင်းရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးဖို့အတွက် IDM ဟာ FName၊ LName၊ Email၊ Serial ဆိုတဲ့စာသားတွေကို registry ထဲမှာ query လုပ်ပါတယ်။ ဒါဆို အင်တာနက်မရှိချိန် register လုပ်တာ အောင်မြင်ပါပြီ။
Serial အား ONLINE တွင်စစ်ဆေးခြင်းမှ ဖယ်ရှားခြင်း
(၄) အင်တာနက်ရှိချိန်မှာတော့ IDM ဟာ သင်ဘယ် serial နဲ့ပဲ register လုပ်လုပ်၊ သူ့ web site ရဲ့ database ထဲမှာရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ serial ကို တိုက်စစ်တဲ့အခါ မတူညီခဲ့ရင် fake serial လို့ယူဆပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပိတ်ပစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ကျော်လွှားဖို့၊ ဖျက်ထုတ်ပစ်ဖို့ လုပ်ရပါမယ်။
IDM ဟာ CALL 00432590 မှာ fake serial ဟုတ်၊ မဟုတ် အွန်လိုင်းမှာ စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါကုဒ်ကိုကြည့်ပါ။
00431C7E E8 0D090000 CALL IDMan.00432590
00431C83 8BF8 MOV EDI,EAX
00431C85 83C4 04 ADD ESP,4
00431C88 85FF TEST EDI,EDI
00431C8A 74 0A JE SHORT IDMan.00431C96
00431C8C C705 E0146600 01000 MOV DWORD PTR DS:[6614E0],1
00431C96 83FF 07 CMP EDI,7
00431C99 0F87 EB000000 JA IDMan.00431D8A
00431C9F FF24BD 58254300 JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558]
00431CA6 8B4D D8 MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-28]
00431CA9 E8 521A0000 CALL IDMan.00433700
00431CAE 85C0 TEST EAX,EAX
00431CB0 0F84 CE010000 JE IDMan.00431E84
00431CB6 E9 90020000 JMP IDMan.00431F4B
00431CBB A1 00216600 MOV EAX,DWORD PTR DS:
00431CC0 8B35 3C075B00 MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&USER32.MessageBoxA>]
00431CC6 68 30000500 PUSH 50030
00431CCB 68 C8706300 PUSH IDMan.006370C8
00431CD0 50 PUSH EAX
00431CD1 6A 00 PUSH 0
00431CD3 FFD6 CALL ESI
ဒီနေရာမှာ JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] ဟာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
(i) JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] မှာ EDI =0ဖြစ်ရင် DS = VA 431CA6 ဆီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပရိုဂရမ်ကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ii) JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] မှာ EDI = 1 ဖြစ်ရင် DS [43255C] = VA 431CBB ဆီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VA 431CBB ဟာ
"Internet Download Manager has been registered withafake Serial Number. IDM is exiting..."
(iii) JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] မှာ EDI =2ဖြစ်ရင် DS  = VA 431CDA ဆီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VA 431CDA ဟာ
"This error message is possible if IDM was used on several computers under the same Serial Number. Please note that IDM has per computer license. In order to use IDM on several computers at the same time please obtain licenses for each on"
(iv) JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] မှာ EDI =3ဖြစ်ရင် DS  = VA 431D2B ဆီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VA 431D2B ဟာ
"Internet Download Manager has been registered withafake Serial Number or the Serial Number has been blocked. IDM is exiting..." စာသားရှိရာနေရာပါ။
(v) JMP DWORD PTR DS:[EDI*4+432558] မှာ EDI =4ဖြစ်ရင် DS  = VA 431D64 ဆီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VA 431D64 ဟာ
"Internet Download Manager has not been registered for 30 days. Trial period is over and IDM is exiting..."
- IDM ကို ပုံမှန်အလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့အတွက် EDI တန်ဖိုးဟာ သုညဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်။
- ဒါကြောင့် TEST EDI, EDI အစား XOR EDI, EDI လို့ပြောင်းပါမယ်။
- ဒါဆိုရင် serial ကို အွန်လိုင်းမှာ စစ်ဆေးတာကို ကျော်လွှားနိုင်ပါပြီ။
- E8 ?? ?? ?? ?? 8B F8 83 C4 04 85 FF 74 0A နေရာမှာ E8 ?? ?? ?? ?? 8B F8 83 C4 04 33 FF 74 0A နဲ့အစားထိုးပါ။
ဤသင်ခန်းစာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အကူအညီပေးခဲ့သော UnREal RCE မှ AlphaPatcher အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
12 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 22nd February 2011, 8:23 am
IDM ရဲ့ patch ဖိုင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
5.xx - 6.xx အတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
5.19 နဲ့ 6.05 မှာ စမ်းသပ်ထားပါတယ်။
13 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software] on 22nd February 2011, 9:03 pm
bro (rhythm ) !! thanks for ur Sharing ..
14 Re: IDM6.03beta Version Crack File [Software]